ईर्ष्या - छातीमा खतरा - रिफ्लक्स रोग
अब पेटले किन घट्छ?
ठेठ लक्षणहरू के हुन्?
मलाई डाक्टरमा जान पर्छ?
एक ट्रिगरको रूपमा उपचार?
क्यान्सरको जोखिम कति ठूलो छ?
धेरैले पहिले फोटो देखेका छन्: आगो छोड्न लाग्ने व्यक्ति, र अर्कोतिर "हेडबर्न" शीर्षक। यो निश्चित रूप देखि एक कुटिल चित्र हो, किनकि हृदय को खट्टा उनको नाम को बावजूद आगो या आगो संग केहि गर्न को लागी छैन। बरु, त्यहाँ एस्फैगसमा चिसो झिल्लीहरूको जलन छ - यसको एक अप्रिय भावना।
ईर्ष्या - छातीमा खतरा (रिफ्लक्स रोग)
लगभग हरेक व्यक्ति यो कहिलेकाहीं अनुभव गर्दछ। जबसम्म लक्षणहरू घन्टी घटेपछि वा धेरै वा दुई दिनमा हराएपछि, त्यहाँ चिन्ता गर्न केहि पनि छैन। तथापि 10 मा 15 प्रतिशतमा प्रभावित व्यक्तिहरूले गहिराइमा जोगाउँछन्, तथापि।
हर्टबर्न - रिफ्लक्स रोग
यिनीहरुमा, म्यूकोसा यति बलियो छ कि यसले यसलाई बेवास्ता गर्दछ। यसका परिणामहरू, प्रत्येक मामलामा उपचार गर्न सकिन्छ भनिन्छ भनिन्छ। यद्यपि हल्का खरगोश लगभग हानिकारक हुन्छ तापनि रोगको उन्नत चरणहरूमा, उचित उपचार बिना, गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू - क्यान्सर-धम्की सहित।
ईर्ष्याको बारेमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको निम्न जवाफहरू सबैभन्दा खराब हुनबाट जोगिन मद्दत गर्दछ।
पीडा कसरी उत्पन्न हुन्छ?
दुष्टको जरा ग्याँस रस हो। यसले अङ्ग्रे गोठालाहरू विभाजित गरेर खाना पकाउने र "यसलाई खुम्च्याउन" को सेवा गर्दछ। उहाँले यो काम एंजाइम (pepsin) को मदद संग र - कि पहिलो मा अजीब लाग््छ - हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक भाग।
हाम्रो शरीरमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड? के यो खतरनाक छैन? जबसम्म गहिरो रस जहाँ रहन्छ त्यहीं सम्म नगर्नु - पेट मा। 1 लाई3को धेरै अम्लीय पीएच को बावजूद - सिरका को तुलना मा सय गुना अधिक अम्लीय हो - पाचन त्रयी त्यहाँ कुनै हानि छैन। तिनीहरूको विशेष संरचनाको कारण, पेटको भित्री पर्खालहरूले यो संक्षारक वातावरण सजिलै सहन सक्छ।
सामान्यतया, एक स्पिन्टेनर एसिफैगस र पेट तंग बीचको संक्रमण राख्छ ताकि कुनै एसिडले पेटको माथिल्लो ओपनको माध्यमबाट बचाउँछ। तर यस मांसपेशी को प्रकार्य अलग-अलग कारणों को कारण परेशान हुन सक्छ (अर्को प्रश्न हेर्नुहोस)। नतिजाको रूपमा, पेट सामग्रीहरू esophagus मा प्रवाह र mucosa जलन। यो खरगोशको रूपमा ध्यान दिइन्छ।
स्प्रेन्टिनेटर, "sphincter" भनिन्छ, जसले पेट प्रवेश गर्न छोड्छ, विभिन्न कारणोंका कारण झल्किन्छ। पहिलो, यो असामान्य उमेरको घटना हो, किनकि ईर्ष्या 50 बाट सुरु हुन्छ। उमेर धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो सामान्यतया रातमा हुन्छ, किनभने एस्फैगस र पेट बीचको स्पिन्जिनर पनि निद्रामा निदाइन्छ। यसबाहेक, गेस्ट्रिक सामग्रीको पुनरावर्ती तल झल्काउँदा मनपर्छ।
अन्य अवस्थामा, एक डायाफ्रामेटिक फ्र्रेचर पेट मा विस्थापन को बिरुद्ध मा परिणाम। Esophagus त्यसपछि आफ्नो तनाव गुमाउँछ, र स्प्रेनेटर अब ठीक तरिकाले काम गर्दैन। ठूलो डायाफ्रेमेटिक फ्र्रेक्चरमा, पेटबाट सामग्रीहरू कहिलेकाहीँ फेरीनक्समा प्रवाह गर्दछ।
ईर्ष्याको क्लासिक लक्षण एक माथिल्लो पेट मा एक दुखद दुखाइ र जलिरहेको छ। दुखाइ कहिलेकाहीँ स्तनपानको पछि लागी विकृत हुन्छ। निस्कने वा पिउने भावनाले राम्रो सुधार गर्दैन। तर यो भावना आवश्यक छैन। केहि अवस्थामा, ग्याँसमा ग्यास्ट्रिक एसिड को रिफ्लक्स सुरुमा कुनै पनि लक्षणहरू ट्रिगर गर्दैन - यो विशेष गरी छ। यदि लक्षणहरू पछि देखा पर्छन् भने, रोगलाई एक उन्नत चरणमा हुन सक्छ, जसले चिकित्सालाई गाह्रो बनाउँछ।
अलिकति लक्षणहरू के हुन्?
Esophagus मा ग्यास्ट्रिक एसिड कहिलेकाहीँ लक्षणहरूको कारण हो कि न त रोगी र डाक्टरले ईर्ष्याको साथ सहयोग गर्दछ। विशेषतया जवान मानिसहरू प्रायजसो सीनेको दुखाइको शिकायत गर्छन्। यदि डाक्टरहरूले हार्दिक आक्रमणमा शासन गरेका छन् भने, समस्या अक्सर खतरनाक हुन्छ।
घाँटीमा एसिडले पनि पुरानो खाँसी वा हजुरतालाई निम्त्याउन सक्छ, जुन चिकित्सकहरू प्रायः प्रारम्भिक सर्दी वा अस्थमा लक्षणहरूको अनुमोदनको रूपमा व्याख्या गर्छन्। कहिलेकाहीँ पीडितहरूले विदेशी शरीरको भित्तामा रिपोर्ट लिरीमा राख्छन्।
कहिलेकाँही खैरो माछा र गुलाब जलाउने चिन्ताको कारण हो। दुर्लभ शिकायतहरूसँग कुनै डाक्टरमा जाने छैन। हुन सक्छ त्यहाँ धेरै धेरै कफी थियो, वा एक भारी, उच्च-मोटो भोजन कारण थियो। यस्ता खानाहरूमा पेटले अम्ल उत्पादन गर्दछ। गलामा अप्रिय भावना सामान्यतया आफैले जान्छ। यद्यपि, यदि लक्षणहरू प्रायः हुन्छन् - हप्तामा धेरै चोटि पीडितहरूलाई डाक्टरसँग परामर्श गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिले जोसुकै घडी धेरै दिनदेखि दुई देखि तीन हप्ता सम्मको लागि अनुभूतिको अवस्था जाँच गर्न रिफ्लेक्स सिफारिस गर्दछ।
उपचार कस्तो देखिन्छ?
पहिलो स्थानमा, बानीहरूको समीक्षा हो। के शरीरको वजन सही छ? के म पर्याप्त हिड्छु? थोरै र सतावटले ईर्ष्या बढाउन सक्छ। स्याउको शराब, मिठाइ र चिसो पिउने बेलामा सावधान रहनुहोस्। शकको अवस्थामा यो बिना यो गर्न राम्रो छ। उस्तै कफी, कालो चिया र कार्बनटेड पेयहरूमा लागू हुन्छ। धूम्रपान हानिकारक छ किनकी निकोटीन पेट्रो एसिडलाई बेवास्ता गर्दछ कि नुस्खा कम गर्दछ। यद्यपि समायोजन गर्ने बानीले मद्दत गर्न सक्छ, यो प्रायः पर्याप्त छैन। त्यस्ता घटनाहरूको लागि, अब त्यहाँ धेरै छिटो-अभिनय औषधिहरू छन्।
हल्का रोगका लागि, एसिड-बाइन्डिंग औषधिहरू उपलब्ध छन् (सक्रिय सामग्री: हाइड्रोलिकस्साइट, एल्लेल्ड्राट्राट, म्याजेल्ड्रेट, सोडियम एल्यूमिनियम कार्बोनेट) साथै क्याल्सियम र म्याग्नेशियम कार्बोनेट। भोजिनिडिन वा कार्टोडिनमा तयारीहरू ग्यास्ट्रिक एसिडको निर्माणलाई रोक्छ। यदि पेट आचरण को एक विकार कारण हो, मिर्च, पनीर, ग्यारियन र कडा candida फूल मदद को हर्बल उपचार संग मदद। गम्भीर अवस्थाहरूमा चिकित्सकहरूले प्रोटोन पम्प इन्ड्रिटरको कक्षाबाट औषधीहरू प्रस्तुत गर्छन्। तिनीहरूले एसिड को गठन सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ दबाउन, तर तुरुन्तै कार्य छैन।
केहि एजेन्टहरूले स्प्रेन्सिने मांसपेशिहरु लाई पेट प्रवेशमा आराम गर्न, इन्सोफैगसमा ग्याण्टिक सामग्रीको फिर्ती सुविधा प्रदान गर्दछ। यसमा विशेष अस्थमा, हृदय र रक्तचाप दबाइहरु समावेश गर्दछ। साथै, केहि कैल्शियम च्यानल अवरोधकहरू र एन्टीडिफ्रेन्टहरूले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्। तथापि, बिरामीहरू तिनीहरूको दबाइ बिना हुँदैन - त्यो जीवन धम्की दिइनेछ। त्यसोभए जो लोग ईर्ष्या देखि पीडित हुनु पहिले उनको डाक्टर संग कुरा गर्नु पर्छ।
एक अपरेशन उपयोगी छ?
यदि एक ईर्ष्या-पश्चात्ताप व्यक्ति कुनै औषधि लिन चाहँदैन भने, यदि उनीहरूले सहन सक्दैन वा यदि उनीहरूमा कुनै असर पर्दैन भने डाक्टरहरूले प्रायजसो सर्जरीमा मद्दत गर्न सक्छन्। यस्तो अपरेसन "fundoplication" भनिन्छ। पेट प्रवेश द्वारको सर्जनबाट सर्जनहरू एक कफ बनाउँछ, जुन तिनीहरू एस्फैगसबाट पेटमा घुमाउँछन्। परिणामस्वरूप संकीर्णले रिसाई स्प्निमेन्जरलाई ठीक तरिकाले प्रकार्य गर्न मद्दत गर्दछ। प्रायः रोगीहरूले अपरेसन पछि असुद्ध रहन्छन्। सामान्य जटिलताहरु को अलावा जो कुनै सर्जरी को पालन गर्न सक्छ (संक्रमण, खराब घाव उपचार), प्रक्रिया सुरक्षित छ (यदि अनुभवी चिकित्सक द्वारा प्रदर्शन गरियो)।
लगभग 10 प्रतिशत मानिसहरु रिफ्लक्स बीमारी संग, esophagus मा विकृत परिवर्तनहरू छन्। यो क्यान्सर पूर्ववर्ती हो, "ब्यारेट को सिंड्रोम" को बोलने वाला चिकित्सकहरु। यीमध्ये अधिकांश रोगहरू प्रभावित हुन्छन्, जसमा रेफ्लक्स बीमारीले धेरै ढिलो गरेको वा अघिल्लो उल्लेखनीय छैन। यस चरणमा पनि डाक्टरले राम्रोसँग उपचार गर्न सक्छन् कि मरीजले आफ्ना गुनासोहरूको साथमा रिपोर्ट गर्दछ।
यो संधै मामला होइन, त्यसैले कहिलेकाँही एक साँचो क्यान्सर परिशुद्धताबाट विकसित हुन्छ। सामान्यतया यस्तो एक प्रसारले स्थानीय स्तरमा सीमित रह्यो। जब प्रारम्भिक खोजी गर्यो, सर्जन प्रायः एन्डोस्कोपिक प्रक्रिया प्रयोग गरेर क्यान्सर सेलहरू हटाउन व्यवस्थापन गर्दछ। हस्तक्षेप पछि यो रोगी को उत्साह को अवस्था को नजदीक गर्न को लागी यो महत्वपूर्ण छ। यदि सफल भएमा, गम्भीर जटिलताहरू दुर्लभ हुन्छन्।